Kuvulwe ikilabhu yezintombi nto eDUT | Isolezwe
Kuvulwe ikilabhu yezintombi nto eDUT
intandokazi / 28 March 2019, 06:59am / PHILI MJOLI
UNKSZ Wandile Khumalo ongusihlalo wekilabhu yezintombi, Izimbali zaseDUT Virgins Society Isithombe: Facebook
IZINTOMBI nto ezifunda eDurban University of Technology (DUT), eMgungundlovu, zivule ikilabhu yazo ezisiza ukuthi zihlele izigcawu zokufundisana nokwelulekana ngokuziphatha kwentombi nto, esikhungweni sezemfundo ephakeme.
UNksz Wandile Khumalo (24) owenza unyaka wesithathu kwiNursing kulesi sikhungo, onguSihlalo weZimbali zeDUT Virgins Society, uthe izintombi nto uma zifika ezikhungweni zezemfundo ephakeme kuyenzeka zizifihle ngoba zisaba ukuthi zizobandlululeka kanti uma kunekilabhu yazo ziyakwazi ukuthi zisondelane ngoba ziphila impilo efanayo.
“Ukuba umuntu omusha esikhungweni sezemfundo ephezulu kunzima ngoba usuke uqala ukuzimela, uqala ukungahlali nabazali, usuke uqala ukuthi kungabikhona umzali okukhumbuza ukuthi ngosuku lokuyohlolwa, usuke sewehlukene nezinye izintombi obujwayele ukuhamba nazo. Kwesinye isikhathi imigido nezinye izinto ezenziwa yizintombi zangakini ziyakweqa ngoba usuke ufunda. Ukwehlukana nabantu abaphila impilo efana neyakho kukwenza ukuthi uma ufika esikhungweni ufihle, ngoba awazi ukuthi le mpilo yamukeleka kanjani kontanga yenu abakhona lapha,” kusho yena.
Uthe ukuzifihla kwesinye isikhathi kuholela ekutheni intombi nto ingene esilingweni ebesingagwemeka.
“Ngale kilabhu yethu evulwe kulo nyaka sigquqquzela ukuthi intombi nto ayingene esikhungweni sezemfundo ephakeme, ifunde ize iphume isazigcinile. Senze uhlelo lokuthi kube nomama walapha eMgungundlovu ozofika esikhungweni sethu azosihlola njengoba besenza sisemakhaya. Okunye esikwenzayo ukuthi siba nezigcawu zokucobelelana ngolwazi njengabantu abasha sikhulume nangezinselelo esibhekana nazo,” kusho yena.
Le kilabhu, uthe kulindeleke ukuthi yethulwe ngokusemthethweni emcimbini ozoba kuyo le nyuvesi maduze.
“Isizathu sokuthi sifune ukuthi kube wumcimbi ukuthi yaziwe njengawo wonke amakilabhu akhona eNyuvesi. Njengoba kuyinto eqalayo sifuna ukuthi sike sikhombise ukuthi sizikhethele ukuzigcina kuze kufike isigaba esifanele. Sifuna nokuveza ukuthi njengoba kunenkolelo yokuthi siyaphoqwa ukuthi sihlolwe, akunjalo ngoba noma sesiziphethe siyaqhubeka nokuhlolwa, bengasekho abazali eduze kwethu,” usho kanje.
Le ntokazi edabuka KwaMhlabuyalingana ithi: “Njengamanje ngingasho ukuthi ngifana nenduna okuyiyona ebheke ukuthi zonke izinhlelo zethu zenziwa ngendlela. Uma sishoda ngemali yokwenza izihlelo zethu kumele ngiphume ngiyoncela komasipala naseminyangweni, okwamanje ngingasho ukuthi yamukeleke kahle, siyakuthola ukwesekwa, “ kusho yena.